Teny fampidirana ny amin’ny Karemy – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 mars 1, 2012 mars 8, 2012 Laisser un commentaire sur Teny fampidirana ny amin’ny Karemy
Karemy : Teny Fampidirana
Ny teny hoe ‘Karemy’ (na « Carême » amin’ny fiteny vahiny) dia avy amin’ny teny latina hoe « quadragesima », izay midika hoe 40 andro, na 40 taona … Ny Fiangonana dia nanao fiomanana 40 andro mialoha ny Paska, dia ny Karemy izany, ary ny andro faha 40 dia mifanandrify amin’ny andro lehibe – ny andro Paska.
Jesosy dia 40 andro tany an-efitra, tsy nihinan-kanina, tena niafy, ary na dia izay nanitrihiny ny lohany aza dia tsy nisy. Teo amin’izany fotoan-tsarotra izany indrindra Izy no nalain’ny devoly fanahy, anefa dia nivoaka ho mpandresy.
Ny zanak’Isiraely koa dia nivezivezy efa-polo taona tany an-efitra ka nandalo fotoan-tsarotra sy fizahan-toetra nahamay, anefa dia tody soa aman-tsara tany amin’ilay tany nampanantenaina ihany, dia ny tany Kanana.
Andeha ary isika mba hiomana amin’ny hanatrehana ny Paska, ka fiomanana amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra, ary ny vavaka. Mety misy ny fiaretana amin’ny fifikirana amin’ny Tenin’Andriamanitra sy vavaka, nefa mbola tsy mafy noho ny fiaretan’i Jesosy tamin’ny nakan’ny devoly fanahy Azy tany an-efitra izany.
Publié parfilazantsaramada mars 1, 2012 mars 8, 2012 Publié dansUncategorized
Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny Teninao